Baabiylooniya - Gpedia, Your Encyclopedia
Baabiylooniya (ingiriis: babylonia; carabi: بابل; luuqada Akadhiga: Bābil; Luuqada Giriiga: Βαβυλών; luuqada Sumerianka: KÁ.DINGIR.RAKI;; Luuqada Yuhuuda: בָּבֶל ) waxay ahayd boqortooyo ay lahaayeen dadka Akadhiyaka taasi oo ka dhisantey caasimadii Baabiyloon ee la aasaasay sanadkii 1894tii C.H. (Ciise Hortii), wakhti yar ka dibna noqotay magaalo-madaxda boqortooyadii Baabiylooniya. Boqortooyada Baabiylooniya waxaa dhisay qabiilka Amorite la odhan jirey ee Akaadhiyaanka ka tirsanaa kuwaas oo deegaan ku ahaa dhulkii loo yaqaanay Mesobotaamiya, taasi oo hadhaagii buruburkeeda laga helo maanta deegaanka Hillal ee ka tirsan wadanka Ciraaq, taasi oo 85 kilomitir (53 mile) u jirta koonfurta caasimada Baqdaad.
Maanta hadhaaga burburka caasimada Baabiyloon waa jaajuur jajabay iyo raad ku hadhay deegaanada carada nafaqada leh ee u dhexaysay labada webi ee Tigris iyo Furaat (Euphrates) ee deegaanka Mesobotaamiya. Inta la ogyahay taariikhda Baabiylooniya waxay markii ugu horeeysay bilaabantey qarnigii 2aad C.H. (wakhti hada lagu qiyaaso 2,200 oo sano ka hor). Boqortooyadan oo markii ay yarayd isku bedeshay maamul-magaalo ee Baabiyloon ayaa waxay la kacday soo bixitaankii boqortooyadii dadka Amorite, taariikhdu markey ahayd 1894 C.H. isla markaana waxay suuqa kala baxday magaaladii wakhtigaas caasimada ahayd ee Akkadiyaanku maamuli jireen "Eridu".
2 Taariikhda Baabiylooniya
5 Dib-U-Dhiska Baabiylon
6 Jadwalka Taariikhda
Magaca boqortooyada Baabiylooniya wuxuu ka yimid magaca magaalada caasimada iyo xudunta u ahayd ee Baabiyloon, taasi oo ereyga Giriiga ah ee Baabiyloon (Βαβυλών) laga soo xigtay magac Akkadiyaanka ah ee Babili. Ka dib, qiyaastii 10 qarni C.H. ayaa magacii Baabili ahaa loo bedelay Baabiyloon taasi oo macnaheedu tahay "Albaabka Alle" (Gate of God). 
Sharaxaad iyo fahanka ku saabsan jiritaanka boqortooyadii Baabiylooniya waxaa laga helay boqortooyadii ka dambeeysay ee Akkadka, kuwaas oo talin jirey wakhti lagu qiyaaso qarnigii 23aad C.H. (Ciise Hortii). Midani waxay sheegaysaa in boqor la odhan jirey Saargoon uu dhisay magaalada Baabiyloon, in kastoo sharaxaad kale sheegayso in boqor Saargoon uu dib u habayn iyo balaadhin ku sameeyay maagada Baabiyloon oo horay u sii jirtey. Laakiin waxaa si fiican loo ogyahay isla markaana la isku raacay in boqor Saargoonkii labaad (Sargon II) ee boqortooyadii Assiyriyaanka uu shaqo badan ka qabtay magaalada, asagoo gaadhsiiyay heer aad u sareeysa, kana dhigay mid maamusha deegaanada u dhow ee Mesobotaamiya.
Wakhtiyadii fiditaanka boqortooyadii Assiyriya (911–608 C.H) boqortooyada Baabiylooniya iyo nawaaxigeedu waxay ku hoos jireen maamulka dadka Assiyriyaanka ah. Wakhtigii maamulka Assiyriya uu gacanta ku hayay boqor Sennacherib, magaalada Baabiyloon wuxuu ku wareejiyay qabiilka "Jaldiin" (Chaldean) oo goortaas lahaa maamul suldaanimo oo hogaamiye u ahaa Merodach-Baladan. Qabiilka Jaldiin waxay si degdeg ah ula wareegeen goobaha ugu muhiimsanaa ee magaalada Baabiyloon ayagoo xasuuq ba'an u geeystay madaxdii magaalada.
Qabsashadii iyo Maamulkii Beershiyaanka
Sanadkii 539 C.H ka dib dagaalkii caanka ahaa ee Oobis (Battle of Opis), ismaamulkii boqortooyada Baabiylooniya waxay gacanta u gashey boqor Sayrus (Cryus the great) ee boqortooyadii Beershiya. Dagaalka uu soo qaaday boqor Sayrus ee boqortooyada Beershiya wuxuu ahaa mid kedis iyo lama filaan ku noqday dadka Amoriteka ee maamuli jirey Baabiyloon. Maadaama uu deyr (wall) adag ku wareegsanaa magaalada, aad ayay ugu adkaatay askartii Beershiya inay si fudud u qabsadaan Baabiyloon. Si kastaba ha ahaatee, maalmo badan iyo iskudayo badan ka dib ciidamadii Beershiya wey galeen magaalada. Inkastoo aanay cadayn sida ay ku qabsadeen, waxaa la sheegay in ay jebiyeen mid ka mid ah albaabada waawayn ee ka samaysnaa birta xadiidka; ama ay soo raaceen biyaha webiga Furaat.
Markey taariikhdu ahayd qarnigii 7aad C.D ayaa waxaa deegaanada Mesobotaamiya qabsaday boqortooyadii Muslimiinta ee wakhtigaasi ku fidey dhamaan bariga dhexe. Maamulkii Dawladda Islaamku waxay boqortooyada Baabiylooniya iyo magaalada Baabiyloon ka dhigeen gobol ka mid ah boqortooyada. Wakhti yar gudaheed dadkii deegaanada Mesobotaamiya (Baabiylooniya, Akkadiyaan, Sumeriyaan, Assiyriya iyo kuwo kale) deganaa waxaa Dawladda Islaamku ku soo rogtay ineey qaataan diinta Islaamka ayadoo kaniisadihii masiixiga loo bedelay masaajido iyo goobo wax lagu barto.
Boqortooyada Baabiylooniya waxay ka mid tahay meelihii ugu horeeyay ee ilbaxnimoda bani aadamku ka bilaabantey, ayadoo safka hore kaga jirta ilbaxnimada deegaanada Mesobotaamiya oo ah xudunta ilbaxnimada aadamaha. Magaalada Baabiyloon waa midii ugu horeeysay ee yeelata bulsho degan oo aad u badan, waxay ahayd hooyga aqoonta, cilmiga iyo waxbarashada ee dadkii wakhtigaas noolaa.
Si kastaba ha ahaatee, taariikhyahanadu waxay isla garteen in Baabiylooniya ay ka mid ahayd boqortooyooyinkii ugu wayneyd dunida wakhtiyadii u dhexaysay 1770 ilaa 1670 C.H, iyo mar labaad wakhtiyadii u dhaxaysay qiyaastii 612 iyo 320 C.H. Intaas waxaa dheer, magaalada Baabiyloon waa magaaladii ugu horeeysay ee yeelata tiro shacab ah oo ka badan 20,000 oo qof, taasi oo ku fadhiday dhul baaxadiisu tahay 890 ilaa 900 hectare (2,200 acre).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Baabiylooniya&oldid=156708"